Donald Trump iyo Kim Jong-Un oo wada saxiixdey heshiis • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Donald Trump iyo Kim Jong-Un oo wada saxiixdey heshiis
Donald Trump iyo Kim Jong-Un oo wada saxiixdey heshiis
June 12, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-Un ayaa wada saxiixdey heshiis kadib shir ay kuwada yeesheen dalka Singpore.
Bayaanka ay wada saxiixeendeen sida laga soo xigtay Trump, ayaa caddaynaya mid dhamaystiran waxana ay bilaabi doontaa hannaanka hub-ka-dhigista ee Nukliyeerka.
“..Waxaan helnay maalin aad u fiican oo wax badan ayaan iska baranay midba midka kale. Waa nin (Kim) aad u tayo badan oo aan bartay inta uu jecel yahay waddankiisa, “ayuu yiri Trump, oo ah dareenkiisa ugu muujiyey isticmaalka badan ee kelmadda “Cajiib”.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-Un ayaa dhankiisa sheegay
“Waxaan helnay kulan taariikhi ah waxaanan go’aansanay inaan ka tagno taariikhdii hore iyo waxa noo dhexeeyey. Dunida ayaa markhaati ka noqon doonta isbedel wayn oo caymis leh ayuu yiri Kim…” “Ma sahlanayn in aan halkan soo gaarno,” ayuu yiri Kim, waxaa jiray caqabado waana ka soo gudubnay,” Trump ayaa ku jawaabay “waa run”.
Labada qodob ee heshiiska ugu muhimsan ayaa ah:
1. Maraykanka iyo DFK waxay gudagalayaan in la dhiso xiriirkooda cusub si waafaqsan rabitaanka dadka labada dal, nabad iyo barwaaqo.
2. Maraykanka iyo DFK waxay ka midoobayaan dadaalka ay u abuuraan nidaam nabad waarta oo ka hirgasha Gacanka Kuuriyada.
Heshiiska labada dhinac ayaa ah is afgarad, waxaana uu u gogol xaarayaa wada hadal dheer oo labada dal wada galaan, kaas oo saameyn ku leh gacanka Kuuiryada.
Trump oo saxaafadda mar danbe oo maanta ah la hadley ayaa sheegay n uu qorsheynayo in uu Kim Jong-Un ku casumo Aqalka Cad ee Maraykanka.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Maraykanka ayaa sheegaya in ay tahay taariikh cusub oo qorontey laakiin ay khatar badan huwan tahay, isla markaana aan la garan karin waxa ka dhab ah Kim Jong-Un. Kuuriyada Waqooyi ayaa caalamka intiisa kale go’doon kaga jirtey waxaana saaran cunno qabetyn aad u xooggan kadib markii dalkaasi yeeshey hanaanka nukliyeerka, isla markaana ay tijabiyeen gantaalo culus oo ay kamid yihiin kuwa balaastikada iyo kuwa xanbaara Nukliyeer.a-